Akụkọ - iji calcium propionate eme ihe
calcium propionate na -eji
Calcium propanoate ma ọ bụ calcium propionatenwere usoro Ca (C2H5COO) 2. Ọ bụ nnu calcium nke propanoic acid.
1 Na -eji
4 njikọ ndị dị na mpụga
Dị ka ihe mgbakwunye nri, edepụtara ya dị ka nọmba E 282 na Codex Alimentarius. A na -eji calcium propionate dị ka ihe na -echekwa ihe n'ọtụtụ ngwaahịa, gụnyere: achịcha, ihe ndị ọzọ e ghere eghe, anụ esiri esi, whey, na ngwaahịa mmiri ara ehi ndị ọzọ.  N'ọrụ ugbo, a na -eji ya, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji gbochie ahụ ọkụ mmiri ara na ehi na dị ka mgbakwunye nri.  Propionates na -egbochi ụmụ nje imepụta ike ha chọrọ, dị ka benzoates na -eme. Agbanyeghị, n'adịghị ka benzoates, propionate anaghị achọ gburugburu acidic. 
A na-eji Calcium propionate na ngwaahịa bred dị ka ihe na-egbochi ebu, na-abụkarị na 0.1-0.4%  (n'agbanyeghị na nri anụmanụ nwere ike ịnwe ihe ruru 1%). A na-ahụ na mmetọ ebu dị ka nnukwu nsogbu n'etiti ndị na-eme achịcha, na ọnọdụ a na-ahụkarị na bred dị nso n'ọnọdụ kacha mma maka ibu ebu. 
N'ime iri afọ ole na ole gara aga, Bacillus mesentericus (eriri), bụ nnukwu nsogbu,  mana usoro ịdị ọcha dị mma taa na bred, yana ntụgharị ngwa ngwa nke ngwaahịa emechara, kachapụrụ ụdị mbibi a. propionate na sodium propionate dị irè megide ma B. mesentericus eriri na ebu. 
Metabolism nke propionate na-amalite site na ntụgharị ya na propionyl coenzyme A (propionyl-CoA), nzọụkwụ mbụ na metabolism nke carboxylic acid. Ebe ọ bụ na propanoic acid nwere carbons atọ, propionyl-CoA enweghị ike ịbanye na ọxịdashọn beta ma ọ bụ okirikiri acid citric. N'ọtụtụ vertebrates, propionyl-CoA bụ carboxylated na D-methylmalonyl-CoA, nke a na-eme ka ọ bụrụ L-methylmalonyl-CoA. Enzyme nke dabere na vitamin B12 na-eme ka nhazi L-methylmalonyl-CoA gaa succinyl-CoA, nke bụ etiti nke okirikiri citric acid ma nwee ike tinye ya ebe ahụ.
A na -ama ụmụaka aka na calcium propionate ma ọ bụ placebo site na achịcha kwa ụbọchị na nnwale crossover na -achịkwa okpukpu abụọ. Ọ bụ ezie na enweghị ọdịiche dị ukwuu site na usoro abụọ, achọpụtara ọdịiche dị mkpa na ọnụ ọgụgụ ụmụaka ụmụaka omume ha “na -akawanye njọ” na ịma aka (52%), ma e jiri ya tụnyere nha nke omume ya “ka mma” na ihe ịma aka (19%). [Foto dị na peeji nke 9] Mgbe etinyere propanoic acid n'ime ụbụrụ òké, ọ rụpụtara mgbanwe mgbanwe omume (dịka hyperactivity, dystonia, nkwarụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ntachi obi) na mgbanwe ụbụrụ (dịka neuroinflammation ebumpụta ụwa, mmụba glutathione) na -etiallyomi na autism mmadụ. 
Enwere ike iji Calcium propionate dị ka ọgwụ fungicide na mkpụrụ osisi. 
N'ime ọmụmụ 1973 nke EPA kọrọ, a chọpụtara na nchịkwa mmiri nke 180 ppm nke calcium propionate nwere ntakịrị nsí na bluegill sunfish. 
A machibidoro calcium propanoate na mba ụfọdụ dị ka Russia n'ihi ụfọdụ ihe nfụkasị ahụ na afọ ọsịsa. 
Oge ezipụ: Jul-20-2021